Muqdisho: Mucaaradka oo doorbidaya dib udhaca doorashada xili Rooble dalka doorasho u dareeriyey. – Radio Daljir
Muqdisho: Mucaaradka oo doorbidaya dib udhaca doorashada xili Rooble dalka doorasho u dareeriyey.
Nofeembar 28, 2020 7:02 g 0
Qabashada doorasho wakhtigeeda ku dhacdo ayadoo la fulinaayo heshiiska siyaasadeed ee gaareen Dowladda Federaalka iyo 5ta Dowlad goboleed ayaa waxay aheyd qodob ku cad barnaamijka xukuumada ee Ra’isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu horgeeyay Golaha Shacabka xiligii uu kalsooniga weydiisanayay.
Kalsooni heliska kadib, waxaa bilowday fulinta heshiiska siyaasadeed ee sida wadajirka ah u meel mariyeen labada Aqal ee baarlamaanka, Waxaana Ra’isal Wasaare Rooble uu wareegto kusoo magacaabay guddiga doorashada federaalka iyo guddiga xalinta khilaafaadka, isla markaana wuxuu magacaabay xubnaha seddaxda ah ee dowladda federaalka lahayd magacaabistooda kuwaasoo ku biiraya guddiyada doorashada ee heer Dowlad goboleed.
Tilaabooyinkan oo lagu fulinaayo heshiiskii siyaasadeed ee doorashada ayaa RW Maxamed Xuseen Rooble ku cadeeyay inuu dalka aaday doorasho oo la rabo inay guddiyada shaqadooda u qabsadaan .
Ka hor magacaabista guddiyada heer federal, madaxda Dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Koofur Galbeed ayaa magacaabay xubnaha 8-da ah ee guddiyada doorashada ee heer dowlad goboleedyadooda ee laga sugaayay, waxaase xusid mudan in aysan siyaasiyiinta mucaaradka markaasi ka hadlin balse ay qayladu isu yeertay markii Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-Qoor) soo magacaabay 8da xubnood ee qaban doono doorashada Galmudug.
Weeraro isku mid ah, hadana kala socda ay ku qaadeen Madaxweyne Qoor-Qoor iyo RW Rooble. Waxaa la ogyahay in siyaasiyiinta ugu tunka weyn ee mucaaradka ah, kuwaasoo u baratamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya, ay safaro deg deg ah ugu baxeen dalka Turkiga si ay ula kulmaan Qoor-Qoor ayna ugu dhaadhiciyaan inuu guddiga badalo, uuna magacaabo xubno ay iyaga wataan.
Tusaale ahaan siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aan tagin Turkiga ayaa si weyn la sheegay inuu uga xumaaday in Maxamed Daahir Guuleed oo ay isku qoys yihiin lagu soo daro guddiga doorashada Galmudug, balse aan banaanka soo dhigin, badalkeedana sheegay in xubnaha guddiyada la magacaabay ay ku wada jiraan xubno ka tirsan Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka.
Maxamed Daahir oo ku nool magaalada Nairobi isla markaana aan wax xil dowladeed ah ka heynin ayaa la rumeysan yahay inuu ka mid yahay dadka siyaasad ahaan sida xooga leh u diidan Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Balse waxaa xaqiiq ah in 8’da Xubnood ee Gudiga Doorashada oo uu magacaabay Madaxweyne Qoor-Qoor laba kamid ah ay leeyihiin taariikh ciidan hadana kujiraan liiska mushahar bixinta ee qaybaha kala duwan ee ciidamada waana mida ay ku doodayaan mucaaradku.
Siyaasiga Cabdikariim Xuseen Guuleed, Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre iyo Madaxweynahii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo dhamaantood kasoo jeeda Galmudug ayaa si xoog leh isugu dayay in ay culeys ku saaraan Qoor Qoor inuu badalo xubnaha 8da ah ee uu magacaabay, taasoo noqotay mid uu Qoor Qoor ka biyo diidey.
Markii ay talaabadan ay socon waydey ayay siyaasiyiintan dhamaantood u ordaya inay madaxweyne ka noqdaan Soomaaliya waxay bilaabeen inay si wada jir ah u hadlaan kuna eedeeyaan in xubnaha guddiyada la magacaabay ay ku wada jiraan xubno ka tirtan hay’adda Nabadsugida, inkastoo aysan warbaahinta u soo bandhigin magacyada xubnaha NISA ee sheegayaan iyo cadeymo xaqiijinaayo, balse waxay uga sii gudbeen weerar xoog lehna ku qaadeen Taliyaha NISA Fahad Yaasiin.
Siyaasiyiinta mucaaradka badan kood oo si hoose u hadlaya ayaa sheegay in guddiyada Hirshabelle iyo Koofur Galbeed aysan wax dhib ah ka taagneen oo ay beelaha daga badankood ku wada qanacsan yihiin balse wal-walka ugu weyn ee siyaasiyiinta uu yahay doorashada oo hoosta kasoo gashay oo aysan dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan diyaar u aheyn inkastoo aysan si toos ah u sheegi karin.
Madaxda Dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaan weli soo magacaabin 8dii xubnood ee qaban lahaa doorashada ka dhici laheyd deeganadooda, taasoo la’aantood aysan suurta gal aheyn in doorashadu ay waqtigeeda ku dhacdo ugu yaraan deeganada Puntland iyo Galmudug.
Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre ayaa la rumeysan inuu yahay siyaasiga mucaaradka ah ee heysta dhaqaale ku filan ee uu doorashada ku gali karo balse uu ka baqaayo in qof xildhibaan ah oo isaga taageersan uunan kasoo bixin Galmudug oo uu kasoo jeedo maadaama maamulka uu hogaamiyo Madaxweyne Qoor Qoor u muuqdo mid isaga garab istaageynin.
Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble ayaa u muuqdo siyaasiyiin si xirfad ku jirto u xod-xodanaya Madaxda dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Koofur Galbeed si ay taageero ugu helaan xubnaha ay doonayaan inay xubno ka noqdaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka.
Isku soo wada duub inta badan siyaasiyiinta aan la dhacsanayn hogaanka Madaxweyne Farmaajo iyo RW Rooble ayaa isku dayaya inay hor istaagan in aysan doorashada ku dhacin waqtiga loo asteeyay maadaama uu waqtiga yahay mid aad ugu dhow oo ay usii dheer tahay xubno aysan jecleysan oo guddiyada doorashada ku jira.
Garowe, Puntland Soomaaliya
Bosaaso: Fursad shaqo- UNCHR- Driver,